Isifundo se-UbuQotho NokweThembeka
Isizathu kungani umuntu alahlekelwe umuzwa wokubaluleka kwakhe nokuzihlonipha.
Yini ebangela ukuthi abantu bahoxe ebudlelwaneni babo, emisebenzini yabo, emaqenjini abo noma emaphusheni abo.
Ubuchwepheshe obuqondile obukusiza ukuthi ususe amaphutha edlule—ukunciphisa usizi olubangelwa izeqo.
Yini ebangela ukuthi abantu bahoxe ekubambeni iqhaza empilweni? Ingane engenankathazo ikhula igcinwe futhi ixwaye lapho isakhula. Owesifazane ophumelelayo emsebenzini oshiya ubudlelwano bobuntu ngemuva komunye ehlushwa ukungazethembi. Indoda ethathe umhlalaphansi ibheka emuva empilweni yayo ngokuzisola ngezinqumo azenzile.
Kunesizathu salezi zimo ezijwayelekile kakhulu. Azimane “zivele zenzeke,” futhi azibekelwe ukudalelwa. U-L. Ron Hubbard uqoqe iqembu locwaningo elibhekisisa futhi lixazulule imbangela eyisisekelo yokuhoxa kwabanye kanye nokulahlekelwa ubuqotho. Futhi wakhulisa indlela eqondile yokusiza abantu ukuthi babuyise imizwa yabo yokwethembeka nokuzethemba. Amaphupho aphukile nokuzisola mayelana nesikhathi esedlule akudingeki ukuthi kuqhubeke nokudonsa abantu ekuzibandakanyeni kulokhu okwamanje.
Kukhona indlela yangempela eyenza abantu bahoxe ebudlelwaneni, emindenini, emaqenjini futhi, nakanjani amaphupho abo. Futhi izimo ezinjalo zingalungiswa. Kulesi sifundo, uzothola ukuthi ungabasiza kanjani abanye baphinde bathole ubuqotho babo—futhi bakulangazelele ukuphila. Umbono omusha wenkinga yakudala, futhi okushoyo ukuthi akusadingeki uhlale eceleni futhi unganakeki ubheke usizi lwabanye. Esikhundleni salokho, uzoba namathuluzi ezandleni zakho axazulula ngokuphelele lolo sizi.
Incwajana UbuQotho NokweThembeka
Lapho sekuqediwe Isifundo se-UbuQotho NokweThembeka, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngithathe isifundo esithi Ubuqotho Nokuthembeka futhi ngazuza kakhulu! I-material yokufunda beyifundeka kalula futhi icophelelwa ngokuphelele Ngifunde okuningi ngami ngokusebenzisa idatha esifundweni. Ngabe sengisiza umuntu engisebenza naye ngokumenza asebenzise idatha efanayo, futhi wenza intuthuko enkulu. Angikaze ngimbone ejabule kangaka Lobu buchwepheshe bulula futhi buqondile, ngakho ke ayikho inkinga yokungena kubo.
“Inkinga yabantu abaningi ukuthi bavame ukuthethelela izinto, balimaze amaqembu ngokweqile ngakho abadinga ukubambisana, bagodlelane imininingwane ukuze bavale izimpilo zabo nalapho behluleka khona. Lesi sifundo, nokho, sisindisa imisebenzi, amaqembu kanye necala. Ngalobu buchwepheshe, nawe ungangaba necala futhi uqine. Ngiyabonga kakhulu ngalobu buchwepheshe futhi ngiyamangala ukuthi umehluko owenzayo!”
“Ngenkathi ngifunda incwajana ethi Ubuqotho Nokuthembeka, kwakukhona izinto eziningi ezavele zangicacela ukuthi kungani ngiphelise ubungane obuningi kangaka, nginqamula ubudlelwane bomndeni nokuthi kungani ngishiyile umnyeni wami. Uma ngibheka emuva kule micimbi, ngangihlale ngizibuza ukuthi kungani ngenze futhi ngisho izinto engaziyo ukuthi zizodala ukuthi omunye umuntu aziqhelelanise nami noma angafuni nhlobo ukuhlangana nami. Kwakunezimo ezazimbi kakhulu, ngangicabanga ukuthi ngangihlanya ngoba kwakungenzi mqondo nakancane.
“Ngesikhathi ngifunda ngezinto zalolu hlelo, ngathola izimpendulo ebengizifuna. Ngezwa ngikhululeka kakhulu kangangokuba ngaqala ukukhala. Kade ngikumaqembu asekelayo futhi ngashiya ngizizwa nginecala futhi ngithwele kakhulu kunangesikhathi ngingena.
"Kuhle ukuvuma, engikwenzile kaningi, kaningi. Kepha ngaphandle kokuqonda ukuthi kungani ukwenzile okwenzile, kumane kuyinkulumo. Akukho ukukhululeka, ukwelashwa noma ukululama. Kade ngikumaqembu asekelayo futhi ngashiya ngizizwa nginecala futhi ngithwele kakhulu kunangesikhathi ngingena. Ungacabanga ukuthi yini ebingafezwa uma amaqembu asekelayo, izazi zokusebenza kwengqondo, odokotela bengqondo nabeluleki befunda le ncwajana namakhasimende abo noma amalungu abo futhi benze izinto ezihlangene ndawonye? Ngikholwa ukuthi izinga lobugebengu lingehla kakhulu emhlabeni wonke!
“Ngenkathi ngenza isifundo se-UbuQotho NokweThembeka, ngangingazisebenzisa njengesibonelo kubo bonke. Lapho kufika isikhathi sokwenza okwenziwayo kokugcina, ngikwenze kimi ukuze ngazi ukuthi ngingakucacisela kanjani omunye umuntu kalula. Angizange ngiqaphele ukuthi kungaba nethonya elingakanani kimi. Isenzo ngasinye esiyingozi nesigodliwe engisibhalile siveze icala nehlazo lalokho ebengikwenzile nengikushilo. Lapho ngifaka ukuqonda kokuthi kungani kulowo nalowo, ngayihlwitha futhi ngayenza yangabi namandla empilweni yami. Futhi isikhathi ngasinye ngangikhala. Ngikholwa ukuthi bekuyizinyembezi zenjabulo yokuthi bengingasafanele ngithwale ubuhlungu nokudideka okungizungezile. Uma ngizibuka esibukweni manje, ubuso bami bubukeka bukhanya futhi bujabula. Manje owami weqiniso uyakhombisa.
“Ngesikhathi ngenza indodakazi yami neklayenti lami benze okufanayo, bekungathi kukhona umuntu ogqekeze isithunzi samagama nezinyembezi. Indodakazi yami ayibhalanga nje kuphela izinto zayo eziyingozi nezigodliwe ephepheni, kepha ingitshele ngomlomo izinto eziningi ebizigcina kuye ngoba ibingafuni ukulimaza imizwa yami noma ngimucasukele. Indodakazi yami ayingitsheli nje ngezinto, ikhuluma nami manje.
“Mina nekhasimende lami siqale ukwenza okufanayo ekhaya lami ekuseni. Akahambanga kwaze kwafika lobo busuku ngoba bekufanele sithathe amakhefu ukuze sidle simyeke akhale futhi aziqambele ukubhala futhi. Ngesikhathi ehamba, ubuso bakhe babukeka buncane ngeminyaka, imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo akhe yayicishe yanyamalala, futhi wamoyizela okokuqala selokhu ngahlangana naye."